Ithegi: netsuite | Martech Zone
NgoLwesine, Meyi 13, 2021 NgoLwesine, Meyi 13, 2021 Douglas Karr
Iinkampani zirhaxwa kwidatha eqokelela kwiCRM yazo, kwintengiso ezenzekelayo, ERP, kunye neminye imithombo yedatha yelifu. Xa amaqela asebenzayo abalulekileyo engavumelani ukuba yeyiphi idatha emele inyani, ukusebenza kuyathintelwa kwaye iinjongo zengeniso kunzima ukufikelela kuzo. ISyncari ifuna ukwenza ubomi bube lula kubantu abasebenza kwintengiso ye-ops, ii-ops zentengiso, kunye ne-ops yengeniso abahlala besokola nedatha yokufumana indlela yokufikelela kwiinjongo zabo. ISyncari ithatha entsha
IrhafuJar yazisa i-Emmet: Intengiso yeNtengiso yeArtificial Intelligence
NgoMgqibelo, ngo-Epreli 4, 2020 NgoMgqibelo, ngo-Epreli 4, 2020 Douglas Karr
Omnye wemiceli mngeni ehlekisayo ye-e-yorhwebo kule mihla kukuba oorhulumente basekhaya bafuna ukutsiba ebhodini kunye nokunyanzelisa irhafu yabo yokuthengisa ukuze bavelise ingeniso engakumbi kwingingqi yabo. Ukuza kuthi ga ngoku, kukho ngaphezulu kwe-14,000 yolawulo lokurhafisa e-United States ngamawaka amathathu eerhafu zemveliso. Umntu oqhelekileyo othengisa imfashini kwi-Intanethi akaqondi ukuba uboya abongeze kwimveliso ngoku bahlela iimpahla zabo ngokwahlukileyo kwaye bathenge oko
NgeCawa, uDisemba 3, 2017 NgeCawa, uDisemba 3, 2017 Douglas Karr
Zimbalwa iidashboard solutiosnnakho ukubanakho ukunxibelelana nayo yonke into, kodwa iChartio yenza umsebenzi omkhulu ngomnxibelelanisi womsebenzisi ekulula ukungena kuwo. Amashishini anokuqhagamshela, aphonononge, aguqule, kwaye abone ngamehlo kuwo nawuphi na umthombo wedatha. Ngemithombo emininzi eyahlukileyo yedatha kunye nemikhankaso yentengiso, kunzima kubathengisi ukuba bafumane umbono opheleleyo kubomi bomthengi, ukubekwa kunye nefuthe labo kwingeniso. Chartio Ngokudibanisa kubo bonke
I-Storyworks1: Iplatifomu yokuThengisa isiQinisekiso sokuThengiswa kweDijithali yendawo
NgoLwesibini, Julayi 7, 2015 Douglas Karr
I-Storyworks1 ibonelela ngeqonga lokuboniswa kweselfowuni yokuxhasa iqela lakho lendawo ngezixhobo zokunceda ukukhulisa ukuthembeka, ukulungelelanisa isicwangciso sentengiso kunye nokwenziwa kwentengiso, kunye nokukhulisa ubudlelwane beshishini kunye nokuqonda okwenene kunye nedatha enokwenzeka. Indawo yokuFumana amaNqaku entsha ye-Storyworks1 ibonelela abathengisi bentsimi ngesakhono sokuvumelanisa indawo yabo yangoku kunye neCRM ngesixhobo esiphathwayo ukwenzela ukubala imephu ekufutshane nethemba kunye neendawo zabaxumi kunye neeprofayili. Indawo yokufumana ithuba yenza ngokwezifiso ulwazi ngokusekwe kwi